My first poem book - "Ma Ni with little umbrella" ( Htee Kalay ne` Ma Ni) .. I miss it so much. Where can I buy all of them? Any Idea?
အယ်- စာအုပ်လေးတွေ ခုထိ ရှိသေးတယ်တော်။ ရှိတာထက်..စလုံးထိ သယ်လာတာ..ချီးကျူးတယ်။
ကဗျာချစ်တဲ့ ဒေါ်လေး ပြန်ဝေမျှထားတဲ့ ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ် လာဖတ်သွားပါတယ် ။
ခေါင်းစဉ်ကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ လှိုက်ကနဲ ဖြစ်သွားတာ။ အခုလို သတိတရ ဖော်ပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်မိတာ အတိုင်းအဆ မရှိ။ အဖေ့ကို ချစ်သူ ခင်သူတွေကြောင့် ရောက်လေရာမှာ သားသမီးတွေ အဖေရသလို တို့မှာလဲ သွေးသားမတော်စပ်တဲ့ မောင်နှမတွေ တပုံကြီး။ အဖေ့ကြောင့် တို့တွေကို အမြဲစာနာ ငဲ့ညှာတယ်၊ စာရေးရင်လဲ အားပေးကြတဲ့အတွက် မေတ္တာကို အချိန်နဲ့အမျှ ခံစားလို့ရနေတယ်လို့ ယုံကြည် ကျေနပ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖေ့ကို ကောင်းသော သတိရခြင်းနဲ့ အမြဲသတိရနေပါတယ်။
အလည်တခေါက် ကဗျာလာဖတ်သွားပါတယ်။ ကော်ပီရိုက်ကို တလေးတစားရှိတာကိုလည်း သတိထား အားကျမိပါတယ် ခင်ဗျာ။
မပန်ဆီမှာ ဒီလိုစာအုပ်လေးတွေ ရှိနေသေးတာ တကယ်ချီးကျူးမိတယ်.. ကဗျာကောင်းတပုဒ်ဖတ်ရတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ မပန်.. :)
ပန်ရေ… ကဗျာဖခင်ကြီးရဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးကို တမြတ်တနိုး သိမ်းထားတာရော
မျှဝေပေးတာ အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင် လေးစားလျက်ပါ… ဘဘဂျမ်းက ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်သော ဘုံဘ၀မှ ငြိမ်းချမ်းစွာပြုံးနေမှာပါ…
ညီမပန်ရေ .. ဆရာကြီးကို အစ်မလည်း တခါဆုံးဖူးတယ်။ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဆရာကြီးကို သတိယမိတယ်။ သူကြိုက်တဲ့ ရွှေပြည်စိုး ဆေးပေါ့လိပ်တောင် ပို့ပေးခွင့်မသာခဲ့ဘူး ညီမရေ။ သူ့စာအုပ်ကလေးကို ပြန်မြင်ခွင့်ရအောင် တင်ပေးတဲ့ ပန့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကဗျာလေး ကိုမျှဝေပေးလို့ တစ်ကယ်ကျေးဇူးမမ
GreenGirl တို့ ကိုးတန်း၊ ဆယ်တန်းလောက်မှာ ဂုဏ်ထူးမြန်မာစာမှာ ကျူရှင်တက်တုန်းက ဆရာကြီးက ပိတောက်မှ သရဖီသို့ စာစုများဆိုတဲ့ စာတိုလေးတွေကို ပေးဖတ်ပြီး မြန်မာစာ အသုံးအနှုန်း၊ အရေးအသားတွေကို ဖတ်မှတ်စေရာကနေ ဆရာကြီးဦးတင်မိုးကို စပြီးရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာတွေဖတ်ပြီး နှစ်သက်မိလို့ ကဗျာတွေလည်း ရှာဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လေးစားအပ်တဲ့ ကဗျာဆရာကြီးတစ်ယောက်ပါ။
ဆရာကြီးအမှတ်တရ ပို့စ်လေးမှာ အတူ လွမ်းဆွတ်သွားကြတဲ့ မောင်နှမများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။